Kukhona okuthile izindlu emibalabala futhi bezitolo, ezitaladini cobbled we Cremieux emgwaqweni ukuthi ukwakheka ngokubeka ikhamera yakho phansi kungenzeki! Lo mgwaqo langa waseParis labangela ukuqala komkhakha uphahlwe pinks, imifino, phuzi, futhi blues, yimuphi umbala ukufanisa ngubo leyo oyisibopho photo shoot. Kwenze ngenjongo igremu, guys!
IVia Toledo ingumgwaqo wasendulo futhi ungenye yezindawo ezibalulekile zokuthenga edolobheni laseNaples, Italy. Lokhu 1.2 amakhilomitha komgwaqo ingenye Streets Emnandi Kunazo Zonke EYurophu. Licala Piazza Dante futhi iphela ekhatsi Piazza Trieste e Trento, eduze Piazza del Plebiscito.
Ivy embozwe izindlu ezitebhisini imfihlo. Kynance Mews e Kensington iyona Streets Emnandi Kunazo Zonke EYurophu. In autumn, mgwaqo sikhanya amahlamvu oluhlaza kanye burgundy, futhi lapho kufika intwasahlobo, izindlu iphenduke ihlathi onsomi. Lendawo London umbono iyiphi Blogger wezulu!
Izindonga ezimhlophe uphahlwe ezingenakubalwa, angadle ngabuhle obutheni imbali izimbiza ezigcwele geranium futhi carnations, enikeza pop ekhazimulayo umbala le ngxenye ekhethekile ngempela edolobheni. Kanye ewumngcingo yayo, cobbled phansi, imigwaqo emikhulu yamatshe, futhi empeleni ukuhlobisa okuhle kodonga, the Mezquita Cathedral kukubuka kusukela phakathi kwezindonga okwenzayo kwalokho ephelele ukuze isithombe esiphelele kakade.
Kususwe ku isikwele esincane eduze nePrimrose Hill, uzothola omunye Imigwaqo Enhle Kunazo Zonke EYurophu kanye ne kakhulu Instagrammable! Ake ubone ngeso lengqondo umugqa kuhle iyashintsha iyaphupha ibe townhouses ukuthi iphakeme, watsheka emhlabeni encane, epaki oluhlaza okungukuthi Chalcot Square. It is a itshe isuke Regents Park futhi edumile Camden Market.
Jabulela ukungcebeleka phansi Edinburgh cobbled Victoria Street egcwele fun, izitolo esiyingqayizivele, futhi eateries. Victoria Street isiqeshana esiqinile ngomlando walo muzi nge izindonga zawo zamatshe nento edonsa izivakashi wakudala abavela kulo lonke elase. Qiniseka uhamba phansi Grassmarket okuyinto wayevela ekhulwini le-14, athengise ngakho konke izinhlobo imikhiqizo zendawo kanye izingcezu eyolanda.
UNyhavn uphawula ibhokisi ngokuba ngumgwaqo ohlangothini lwetheku ogqoke umbala, nge enhle isikebhe insika, amathilomu amnandi, nezindawo zokudlela ezisezingeni eliphakathi zombili. Lokhu edolobheni inama eCopenhagen quirky umkhathi Isitolo Vibe kanye emgwaqweni olunothile kunazo emzini. No trip to Copenhagen is complete without a stroll and a photo here though.
ukuhamba (noma isikebhe ride) phansi lo mgwaqo enhle e Venice kufana nokuthatha uhambo rainbow. Burano kuyinto esiqhingini phakathi Venetian Lagoon, kodwa uma wake lucky ngokwanele ukuba uvakashele uzobe washo ikhamera yakho (Umakhalekhukhwini) ngokushesha. Izindlu nge umsele enhle egijima uqonde kube ngakho enchanting. Luhlobo lwendawo olungaphakamisa imizwa yanoma ngubani ngokuphazima kweso.
Thatha ukungcebeleka phansi edumile emhlabeni East Side Gallery. Umgwaqo nge langempela ezivulekile igalari lemva zonke kanye izinsalela uDonga LwaseBerlin. Kukhona amathuba Insta galore phansi lo mgwaqo njengoba wobuciko liyamangalisa, kodwa libuye libe isikhumbuzo amakhaza yomlando Berlin kanye neMpi Yomshoshaphansi.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “10 Iningi Streets Beautiful EYurophu Ukuze Hlola” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-beautiful-streets-europe%2F%3Flang%3Dzu – (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)